Sayensị | Netwọk Mgbasa Ozi
Ofwa nke Ciencia na-ekpuchi ọtụtụ ihe ọmụma, ebe a anyị ga-anwa ịnye gị ozi niile dị mkpa iji nwee ọ enjoyụ sayensị na meteorologicalAnyị na-atụ anya na ị ga-enwe ọ everythingụ n'ihe niile ma echefula na ịmara nke ọma ihe gbara anyị gburugburu na-eme ka anyị nwekwuo ike n'ọnọdụ a.
Data, ozi n'ozuzu, ihe ndi ozo na ogologo wdg. Nke ahụ mere ka ohere a bụrụ ezigbo ebe ịnụ ụtọ ihe ọmụma n’ozuzu na onye maara, teta ihe si n’ime nke na-eme ka anyị nwee mmasi banyere isiokwu dị ka sayensị.
por Portillo nke German eme Ụbọchị 2 .
Osimiri Yangtze dị na China bụ osimiri mara mma nke nwere ngụkọta ogologo ya dị ihe dị ka kilomita 6.300 yana mpaghara…
Kedu ihe bụ okike
por Portillo nke German eme 1 izu .
Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe gburugburu ebe obibi bụ. Ecosystems bụ sistemu ndu mebere nke otu ihe dị ndụ na-emekọ ihe…
por Portillo nke German eme 2 izu .
Satịlaịtị ihe nleba anya ụwa kachasị elu bụ nke sitere na Vandenberg Air Force Base weputara…
Ụwa anyị nwere ihe karịrị nde afọ 4.500 evolushọn. N'oge a niile enwere ọtụtụ mgbanwe na…
N'ime gburugburu ebe obibi dị iche iche nke ụwa anyị enwere ọtụtụ ụdị ala nke dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dịka ihu igwe,…
agba nke oké osimiri
por Portillo nke German eme 1 ọnwa .
Ahụmahụ nke anyị na-agwa anyị na agba nke oke osimiri nwere ike ịgbanwe nke ukwuu site na oge na ebe: site na…
por Portillo nke German eme Ọnwa 2 .
Nọmba e, Nọmba Euler ma ọ bụ Napier a ma ama bụ otu n'ime ọnụọgụ na-enweghị isi nwere oke…
Gịnị mere ụgbọ elu ji efe efe
N’agbanyeghị na anyị nọ n’afọ 2022, a ka nwere ọtụtụ ndị na-aghọtaghị ihe mere ụgbọ elu ji efe efe. N'ịbụ…
zuru oke ọnụ ọgụgụ
Mathematics adịla kemgbe mmalite. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na nchọpụta nke ọkpụkpụ Ishango (ihe karịrị afọ 20.000 gara aga ...
Fractal bụ ihe geometric nwere ike kewaa akụkụ, nke ọ bụla yiri ihe mbụ. Ndị fractals ...
Na May 8, 1654, n'obodo German nke Magdeburg, Emperor Ferdinand III na ndị otu ya gosipụtara…
Ọdịdị nke ụwa
Oge Mesozoic: ihe niile ị kwesiri ịma
Cenozoic Era: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara
Ọnye na-bụ Alfred Wegener?
Oke Osimiri: mmalite, njirimara na ike
Kedu ihe bụ, olee otu esi akpụ ya na njirimara nke glacier
Gini mere mmiri nke mmiri ji etolite ma kedu ụdị ha nwere ike inwe?